Wakiilka ciyaaryahan Milan Skriniar oo sheegay in Kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ay wada doonayaan xiddigan – Gool FM
(Milano) 22 Maarso 2019. Wakiilka difaaca kooxda Inter Milan ee Milan Skriniar ayaa shaaca ka qaaday in labadaba Real Madrid iyo Barcelona ay wada doonayaan saxiixa xiddiga uu wakiilka u yahay suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
Skriniar ayaa loo arkaa mid ka mid ah difaacyada ugu fiican kubadda cagta Yurub, iyadoo sidoo kale Manchester United si xoog leh loola xiriirinayay adeegyadiisa dhowrkii todobaad ee u dambeeyay.
Wakiilka ciyaaryahankan ninka la yiraahdo Mithat Halis ayaa qiray in kooxaha Real Madrid iyo Barca ay wada doonayaan saxiixa xiddigan reer Slovenia.
“Real Madrid waxa ay doonaysaa inay la saxiixato isaga, Barcelona iyadana sidoo kale, kooxahan ayaana ka dhaadhicin kara Inter inay la saxiixan doonaan isaga xagaagan.” Halis ayaa sidaa u sheegay Jariiradda Marca.
“Skriniar waxa uu leeyahay xirfad ciyaareed oo sare, haddii Real Madrid ay doonayso inay la soo saxiixato isaga waa ay awoodaan, waxaa jira wakiillo sida cannibals kuwaas oo doonaya inay ciyaartoy u qaataan kooxaha danaynaya.” ayuu hadalkiisa raaciyey Halis.
Skriniar ayaa kooxda Inter Milan kaga soo biiray Sampdoria xagaagii 2017-kii, waxaana uu u saftay 76 kulan kooxda reer Talyaani.
24-sano jirkaan ayaa heshiiskiisa garoonka San Siro waxa uu ku eg yahay illaa dhammaadka xilli ciyaareedka 2021-22.